Horudhac: Atletico Madrid vs Liverpool… (Waa sidee rikoorka ay Reds ka heysato booqashooyinkii ugu dambeeyay UCL-ka ee dalka Spain?) – Gool FM
Horudhac: Atletico Madrid vs Liverpool… (Waa sidee rikoorka ay Reds ka heysato booqashooyinkii ugu dambeeyay UCL-ka ee dalka Spain?)
Ahmed Nur October 19, 2021
(Madrid) 19 Okt 2021. Waxaa dib u ambaqaadmi doona tartanka UEFA Champions League toddobaadkan iyadoo caawa la ciyaarayo kulammo ka tirsan, waxayna indhaha caalamka kusii jeedaa magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain halkaas oo ay Atletico Madrid kusoo dhoweyneyso Liverpool kulan ciyaareed qayb ka ah guruubka B.
Waxay farxadi ku dambeysay Atletico marka la eego is-araggoodii ugu dambeeyay maadaama ay Reds ku reebtay wareegga 16-ka ee tartanka horyaallada Yurub xilli ciyaareedkii 2019/20 oo ay wadarta labada lug ku dubatay 4-2.
Saacadda ay bilaabaneyso ciyaarta: 10:00 Habeennimo xilliga Geeska Afrika
Garsooraha: Daniel Siebert (Germany)
Macallinka Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa ka bad-qaba dhaawacyo cusub, waxaana kaliya ka maqnaan doona safkiisa Mateus Cunha oo dhaawac bowdada ah la tacaalaya.
Dhanka kale, Jurgen Klopp ayaa ku jira xaalad ka duwan tan dhiggiisa, maadaama uu heysto dookhyo kooban oo khadka dhexe iyadoo ay dhaawacyo kaga maqan yihiin Thiago Alcantara, Curtis Jones iyo Harvey Elliott, inkastoo uu nasiib wanaag dib u helayo Fabinho iyo Goolhaye Alisson Becker oo ka maqnaa kulankii Premier League.
Waa markii saddexaad oo ay Liverpool booqaneyso garoonka Wanda Metropolitano iyadoo gegadaas kugula guuleysatay Champions League fasalkii 2018/19, waxaase difaacashadoodii xilli ciyaareedkii xigay soo af-jaray Atletico Madrid oo wareegga 16-ka ku reebtay.
Naadiga lagu naaneyso Los Rojiblancos ayaa hal guul u jirta inay gaarto guusheedii 50-aad ee Champions League min heerka guruubyada illaa fiinaalka.
Atletico ayaa kaliya hal guuldarro kagala kulantay kooxaha ka dhisan Ingiriiska marka ay marti u noqdaan, waxaana garoonka Wanda Metropolitano ku garaacay Chelsea sanadkii 2017 kulankaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee garoonkeeda haatan ku ciyaarto tartammada Yurub.
Liverpool ayaa kaliya hal guul ka gaartay kooxaha ka dhisan Spain 14-kii jeer ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay iyadoo saddex barbarro la gashay halka sagaal jeerna la garaacay, docda kale, guuldarradii kasoo gaartay Real Madrid xilli ciyaareedkii hore ayaa ka dhigtay inay guul la’aan tahay toddobadii jeer ee ugu dambeysay oo ay tartanka Yurub ku booqatay kooxaha reer Spain iyadoo ay guul ay kusoo gaarto carrada dalkaas ugu dambeysay 2009 markaas oo ay 1-0 kusoo dubatay Los Blancos.
Gool waqti dambe uu dhaliyay Lacazette oo guuldarro ka badbaadiyay kooxda Arsenal… +SAWIRRO
Atletico, Liverpool, Man City, AC Milan, Real Madrid, Inter Milan, PSG & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartanka UEFA Champions League